China Meal Manufacturers and Factory - Ningbo Dearevery Electronic Technology Co.,Ltd
घर > उत्पादनहरू > Meal
सिलिकन फिडिंग चम्मच
बेबी सिलिकॉन सफ्ट हेड स्प्रिंग कुनै अधिक उकालो ईटरहरू & amp; भान्सा फिडिंग। गम-फ्रान्सेली मुलायम सिलिकॉन युक्तिहरू मठमा परमल हुन्छन्, शिशुको बच्चाको नाजुक घोर निविदाको गज र नयाँ दाँतको रक्षा गर्नुहोस्। नरम किनारले बच्चाहरूको लागि दुखाइको कारणले गर्दा उनी वा त्यो चीज होईन।4-6महिना पुरानो प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बच्चाहरु को चूषण प्लेट शार्क टैंक
बच्चाहरु को चूषण प्लेट शार्क टैंक लाभकारीता
1.सबै एक-एक प्लसमाट + प्लेटले ग्यास समावेश गर्दछ।
2. कुनै पनि फ्लैट सतहमा पलमेमेट सप्पहरू बाक्लो कटोरा / प्लेटहरू कम गर्न।
3. शिशु र toddlers संग खाना खाने को लागि पूर्ण (6+ महिना)।
4. उच्च गुणवत्ता वाला सिलिकॉन बाट बीएमए, बीपीएस, पीवीसी, लेटेक्सस र फर्थटाट मुक्त छ।
एक टुकडा सिलिकॉन प्लामामाट
सिलिकॉन गिच डिश स्व-फिडका लागि साना सिक्नेहरूको लागि एकदम राम्रो छ। विभाजित प्लेट को बच्चाहरु को लागि बिल्कुल आकार मा छ। एक बलियो चूषण आधार सुनिश्चित गर्दछ कि डिश रहन्छ - सबै भन्दा आक्रामक बच्चा पनि संग! Highchair ट्रे वा तालिकाहरूमा प्रयोगको लागि राम्रो।